कसरी भयो हिन्दु धर्मको उत्पत्ति ? जानी राखौँ ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»कसरी भयो हिन्दु धर्मको उत्पत्ति ? जानी राखौँ !
By शर्मिला गुरुङ on १५ माघ २०७४, सोमबार ०६:०९ धर्म/दर्शन
काठमाडौँ : विश्वमा हिन्दू धर्मलाई सबै धर्महरू भन्दा धेरै पुरानो मानिन्छ । पृथ्वीमा मानवको उत्पतिसँगै हिन्दू धर्मको इतिहास जोडिएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस धर्मलाई वेदकालबाट पनि पूर्वको धर्म मानिन्छ, किनभनें वैदिक काल र वेदहरूको रचनाको काल अलगअलग समयमा भएको मानिन्छ ।
धार्मिक साहित्य अनुसार हिन्दू धर्म सम्बन्धी अन्य मान्यताहरु पनि रहेका छन् । ९० हजार वर्षभन्दा पहिला यो धर्मको प्रारम्भ भएको थियो। रामायण, महाभारत र पुराणहरूमा सूर्य र चन्द्रवंशी राजाहरूको वंश परम्पराको उल्लेख उपलब्ध छ । यसका अतिरिक्त अनेक वंशहरूको उत्पति र परम्पराको वर्णनमा पनि हिन्दु धर्मको उतपत्तिका विषयमा कुराहरु आएका छन् ।
पहिला चार वेद रचियो, जसमा ऋग्वेद प्रथम थियो । त्यस पछि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उपनिषद जस्ता ग्रन्थहरू आए । हिन्दु धर्मको उत्पत्ति वैदिक संस्कृतिबाट इशापूर्व २००० वर्षभन्दा पहिला भएको मान्यता छ । हाल विश्वमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरु १ खर्ब ५ अर्ब छन् । सो मध्ये ९६ प्रतिशत दक्षिण एशियामा बस्छन् । बिभिन्न अनलाइनहरूकाे सहयाेगमा